Home » Featured » Ny lahatsarin'ny KHQ-TV dia manome lahatsary Digital miaraka amin'ny FUEL, Bitentral's Linear on Demand Streaming Solution
Volana maro lasa izay dia nanoratra lahatsoratra aho Bitcentral, ny mpamatsy ny famokarana vaovao momba ny famokarana vaovao fantatra amin'ny asa mahomby amin'ny fampielezam-baovao sy ny FUEL tena anton'izanyTM pifidianana. Ny FUEL dia manome sy manome alalana amin'ny TV sy mpanolotra aterineto hanokatra volavolam-pivarotana vaovao manome ny mpijery ny safidy hijerena ny famoahana an-tserasera hatrany am-piandohana na oviana na oviana izay tadiaviny, manoloana ny fijerin'izy ireo amin'ny fahitalavitra, telefaona, tablette na solosaina. I FUEL dia manampy amin'ny fandresena ny tsy fisian'ny vola amin'ny YouTube, Facebook ary ny toy izany amin'ny fampidinana ny votoaty ao amin'ny media sosialy ary ny fametrahana azy amin'ny sehatra fitantanana mivantana. Izany dia mpandrindra lalao efa ela loatra ho an'ireo mpandahateny sy orinasa fampahalalam-baovao satria i FUEL dia manome azy ireo ny fitaovana mety, ny vokatra mety ary ny fanadihadiana marina mba hananganana tsara kokoa ny votoatiny sy ny dokam-barotra amin'ny sehatra rehetra. Miaraka amin'izany dia efa nandrasako ny fandresena azafady vao haingana mba hanamarina ny teknolojia sy ny faminaniako. Soa ihany, tsy voatery niandry ela be aho Bitcentral tsy nandiso fanantenana.
Ny KHQ, Cowles Broadcasting ao Spokane, WA, vao haingana Bitcentralny sehatra digitale FUEL ao amin'ny efitranon'ny vaovaon'ny serasera. Ny KHQ dia nikaroka lalana mora ahazoana ny fidiram-bola vaovao amin'ny fampiasana ny fananana efa misy izay hampitombo ny fandraisana anjaran'ny mpijery, ka miteraka vokatra bebe kokoa. Taorian'ny fahazotoany nanadihady ny safidy teknolojia, nivadika ho ny KHQ Bitcentral mba hanararaotra ny fangatahan'ny FUEL's Linear on DemandTM fandefasana fonosana sy automation, izay mamoaka tantara amin'ny sehatra rehetra sy ny sehatra dizitaly manokana ho an'ny mpijery tsirairay.
"Faly be izahay ny hampidirana io sehatra fifanakalozan-kevitra io izay manova mandrakizay ny tontolon'ny fampitam-baovao," hoy i Neal Boling, mpanatanteraka ao amin'ny garan'i Cowles. "Tsy andrinay ny hahita ny habetsahan'ny FUEL afaka mampitombo ny fidiram-bola vaovao amin'ny fampiasana ny vola misy anay. Fotoana izao hijanonan'ny adin-doka dizitaly miaraka amin'ireo tompon'ny aterineto, ary ny FUEL dia manao izany ho antsika, "hoy i Boling nanampy. Nolazain'i Mr. Boling tao amin'ny News Technology Summit tao amin'ny News Technology Summit momba ny fahombiazan'ny fiasan-tsolitany tao amin'ny fiasan'ny Digital, voalohany mpamatsy angon-drakitra, amin'ny serivisy mivantana amin'ny serivisy ho an'ny live live broadcast, ary manome ny votoatiny ho levona amin'ny fihenan'ny mpijery an-tariby, fanoloana ny dokambarotry ny rivotra miaraka amin'ireo dokambarotra dizitaly.
Fred Fourcher, BitcentralNy mpanorina sy ny CEO dia nanamarika fa tena faly ny orinasa nahita ny KHQ nandray soa avy amin'ny fametrahana ny sehatra FUEL. "Cowles dia lalao goavana ho an'ny FUEL noho ireo toerana maro samihafa ary maniry ny hanararaotra sy hanitatra ny votoaty dizitaly manerana ny orinasa," hoy i Fourcher nanohy. "Ny FUEL dia manome ny traikefa manokana amin'ny maha-mpihaino azy, toy ny fahitalavitra, izay miteraka faharetana maharitra, izay mampitombo ny vidim-piainan'ny votoaty an-tserasera amin'ny mpanjifa."
Rehefa afaka adiny roa am-polon-tserasera ny aterineto, ny fampielezam-peo ihany dia mahatratra ny ampahany amin'ny fidiram-bolan'ny aterineto izay mety ho azon'izy ireo atao. Ny FUEL dia manodina an'io manodidina io miaraka amin'ny fanodinana tsotra izao, ny end-end-end-endy izay mahatonga azy ho mora "mamindra ny fantsona manokana" - izay mifandray amin'ny traikefa goavana dia nahatonga ny fotoana maharitra 4X faharetan'ny fotoana. Ny tsipika ambany ho an'ny fahitalavitra dia hijery fotoana lava kokoa, dokam-barotra bebe kokoa, ary fidiram-bola bebe kokoa. Tsy fandresena malaza no mandresy.
Spears & Arrows Ultra HD Forum virtoaly zava-misy	2018-10-17
Previous: Ny Evolisiona M & E dia manampy ny Indostrian'ny Tantara momba ny Tantara
Next: V-Nova miaro ny fampiasam-bola manan-danja avy amin'ny Novator Partners